"Ngifisa ukube ngasikhipha isisu" - Ilanga News
Home Izindaba “Ngifisa ukube ngasikhipha isisu”
“Ngifisa ukube ngasikhipha isisu”
Unina “kamalugaju” ubalisa ngokuzala umbulali
UTHI usephila impilo yokucasha, kunzima nokuphumela emgwaqweni uNkk Cashephi Khomo (62), ongunina “kamalugaju” okuthiwa ubebulala abantu besifazane eMthwalume. Lapha uthathwe echaza ukuthi indodana yakhe ikhule ingumuntu onjani.
“KAKUVUMI nokuthi ziphume izinyembezi ngokushona kwendodana yami ngenxa yokuthi isosha lifela emsebenzini walo,” usho kanje uNkk Cashephi Khomo (62), waseDingimbiza, eMthwalume. Ungunina kaMnu Mduduzi “Mafutha” Khomo (41), okuvele ukuthi uzilengise wafa esitokisini samaphoyisa eScottburgh ngoMsombuluko ekuseni kade kulindeleke ukuba ayovela eNkantolo yeMantshi yaseScottburgh ngemacala abesolwa ngawo okubulala ngesihluku abesifazane abehlukene qede izidumbu zabo azilahle ezimobeni eMthwalume.
ILANGA selibike kaningana ngokutholakala kwezidumbu ezimobeni zakule ndawo njengoba zigcine ziwu-6 ezitholakele kanti kusenovalo ngabesifazane ababili, okungu-Nkz Nosipho Myende (24) noNkz Nosipho Gumede (32) osekunesikhathi eside kungaziwa ukuthi bakuphi.
Engxoxweni ekhethekile neLANGA ngo-Lwesibili, uNkk Khomo uthe ukube wayazi ukuthi uthwele umbulali, wayeyosikhipha isisu noma acele uNkulunkulu ukuba angamniki le ngane “eshiye yone kangaka”.
Uficwe yileli phephandaba ehleli yedwa emzini wakhe eziwashela izimpahla zakhe, kungekho lutho olukhombisa ukuthi ushonelwe njengoba bekungakhanyisiwe ngisho amakhandlela.
Ubalise ngokuthi usesaba ngisho ukuphumela emgwaqweni ngoba akazi ukuthi amalungu omphakathi amcabangelani, nokuthi azombheka kanjani ngento eyenziwe yindodana yakhe.
Uveze ukuthi kunzima ukuthi aqale amalungiselelo omngcwabo, usalinde ukuzwa ngenduna yendawo ukuthi izobavumela yini ukuthi indodana yakhe ingcwatshwe egcekeni njengoba ishone isolwa ngokuba ngumbulali.
“Ngisele necala engingalenzanga, ukube nginamandla ngabe ngiyokhalisa imindeni eyalahlekelwa yizihlobo zayo ngenxa yesandla sendodana yami. Nami ngingumama, ngiyabazi ubuhlungu bokuba ngumzali, kuyazwela kakhulu kimina ukuthi kunabantu abafelwa yizingane ngenxa yendodana yami.
“Bengingazi ukuthi kanti laba bantu okuthiwa batholwa bebulewe nje, babulawa yindodana yami,” usho kanje ebalisa.
Utshele ILANGA ukuthi indodana yakhe ibingahlali emzini wakhe, ibihlala nonina wezingane zayo ezimbili, nazo izingane emqashweni oseduze kwakwakhe.
“Besekunesikhathi eside ngagcina ukumbona. Ubejwayele ukufika lapha ekhaya uma ezonana ukudla, akhale ngokuthi kabanakho, uselinde ukuthi ahole. Kuyothi angahola ahambe angabe esabuya. Selokhu waqala ukusebenza egalaji, kangazi ngisho isenti lakhe. Ubefika ngoba kukhona into ay-dingayo lapha ekhaya,” kusho uNkk Khomo.
Uthi uMafutha waxoshwa nguyena emzini wakhe ngenxa yokuthi wayehlala ngokuklwebhana nonina wezingane zakhe.
Utshele ILANGA ukuthi indodana yakhe ikhule iyingane ephansi, ingakukhonzile ukukhuluma kakhulu. Kuthe uma isikhulile yaqala yaganga, iphuca abantu omakhalekhukhwini, yaze yagcina iboshiwe.
Yize engasakhumbuli ukuthi yahlala iminyaka emingaki ejele, kodwa uthi yaba ngaphezu kwemibili. Uthi yaphuma ejele yahlala nentombi yayo emzini wakhe kodwa wagcina ebaxoshile ngenxa yokuthi wayengazwani nokuphuza kwabo utshwala.
“Ngize ngathola indaba yokuboshwa kwendodana yami ngoLwesihlanu ekuseni ngitshelwa ngamadodana akhe amabili eneminyaka ewu-9 no-11. Adlule lapha ekhaya angimemeza ngaphandle kwesango angitshela ukuthi kuboshwe uyise ngezinsolo zokubulala abesifazane abatholakale ezimobeni.
“Kuthe ngisamangaliswe yilokho, kwaqhamuka unina wazo izingane ethwele izikhwama ethi uyagoduka, naye waqinisekisa ukuthi indodana yami iboshiwe, wanginika umazisi wayo. Ngithuke ngoma, ngazibuza ukuthi le ngane isithathephi isibindi esingaka sokwenza into embi kangaka,” esho.
Uthi ngesikhathi elungiselela ukuya enkantolo ngoMsombuluko ekuseni, eyolalela icala, uthole ucingo oluvela emaphoyiseni emxwayisa ngokuthi angabe esaya ngenxa yokuthi kugcwele kakhulu futhi amalungu omphakathi athukuthele agane unwabu.
Amtshele nokuthi angabe esanyakaza lapho ekhona, makalinde wona. Afike amtshela ukuthi indodana yakhe isizilengisile.
Uthi kazimfikelanga izinyembezi ngesikhathi amaphoyisa emtshela lokho. Induna yendawo, uMnu Zamokuhle Mtshali ekhulume neLANGA ocingweni ithe kusazoba nomhlangano nenkosi ukuze kunqunywe ukuthi uzovunyelwa yini umndeni wakwaKhomo ukufihla ithambo lawo egcekeni noma kuzomele uthole enye indawo.
Previous articleBadumele uZandile Gumede eqokelwa esishayamthetho
Next articleUkhwantalala i-Orlando Pirates idliwa